Munaasabad Lagu Tageerayay Ra’iisu l wasaaraha Cusub ee Soomaaliya Oo lagu Qabtay Galkacyo “Sawirro” – Radio Muqdisho
Munaasabad lagu tageerayay magacaabista raysal wasaaraha cusub ee Dalka Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa maanta lagu qabtay hotelka embassy ee Magaalada Galkacyo ee xarunta Dowlad Gobaleedka Galmudug.
Munaasabada lagu tagerayay raysal wasaaraha cusub ee Dalka Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa waxaa ka qeyb galay madaxweynaha dowlad Gobaleedka Galmudug mudane Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka Galmudug waxgarad aqoon yahano ururada haweenka iyo dhalinyarada dowlad Gobaleedka Galmudug.
Duqa Dagmada Galkacyo ee dowlad Gobaleedka Galmudug mudane Bile diini Cali ayaa ugu horeeyn munaasabada ka hadlay waxaana uu sheegay in isagoo ku hadlay magaca shacabka magaalada Galkacyo ayaa soo dhaweeynayaan magacaabista raysal wasaaraha cusub ee dalka mudane Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke sidoo kalana alle ay uga baryayaan in xilka loo igmaday uu la garab galo.
Ugaas Maxamed Cabdi Xareed oo isna ku hadlayay magaca golaha dhaqanka Galmudug ayaa sheegay hadeey yihiin golaha odayaasha dhaqanka ee dowlad Gobaleedka Galmudug ay si weyn usoo dhaweeynayaan in madaxweynaha soomaaliya uu u magacaabo mudane Cumar C/rashiid raysal wasaaraha Dalka.
Munaasabada lagu soo dhaweeynayay mudane Cumar C/rashiid raysal wasaaraha cusub ee Dalka oo qaatay muddo saacadaa ayaa dhamaan bulshadii ka hadashay waxa ay si isku mid ah ugu dhawaaqeen in ay tageersan yihiin in markii labaad uu dalka ka noqdo raysal wasaare mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
Ugu danbeeyna Madaxweynaha dowlad Gobaleedka Galmudug Mudane Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in dowlad gobaleedka Galmudug iyo Shacabkiisuba ay si weyn u soo dhaweeynayaan in madaxweynaha Jamhuuriyada Fadaraalka Soomaaliyeed Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabo in uu noqdo raysal wasaaraha cusub ee Dalka Mudane Cumara C/rashiid Cali sharmaarke.
Madaxweyne Qeybdiid ayaa gunaanadkiina sheegay in aan loo baahneeyn khilaaf joogtaa kasoo oo tilmaamay inuu yahay midka ragaadiyay horumarka umadda soomaaliyeed ay ku hamineeyso in ay gaaraan mustaqbalka dhaw.
Munaasabadaan lagu tageerayay raysal wasaaraha cusub ee dalka mudane Cumar C/rashiid Cali sharmaake y ayaa kusoo gaba gaboowday jawi farxadeed iyadoona laga dheehanayay dhamaan bulshadii ka qeyb gashay wajiyadooda sida ay ugu faraxsan yihiin in madaxweynaha Dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu raysal wasaaraha cusub ee dalka u magacaabo mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke oo isagu horay usoo qabtay xilka raysal wasaaraha xiligii dowladii Kmg aheyd ee uu hogaaminayay mudane sheekh Shariif Sheekh Axmed.
C/risaaq Maxamed Axmed Xafiiska Warqabadka
warbaahinta qaranka ee Galkacyo